Covid-19 ပျောက်ဆေး ရွှေမြန်မာဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံများရရှိဖို့ မျော်လင့်နေကြ – Android App Zone
Covid-19 ပျောက်ဆေး ရွှေမြန်မာဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံများရရှိဖို့ မျော်လင့်နေကြ
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ပျောက်ဆေး ရွှေမြန်မာဖော် ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီ
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကိုအမြစ်ပြတ်ကုသနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုအာမခံချက်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြင့်တင်ပြလာ ဧပြီလဆန်းတွင်နိုင်ငံတေည်သမ္မတရုံးသို့စတင် တင်ပြ သမ္မတရုံးမှကော်မရှင်ထံတင်ရန်လမ်းညွှန် ကော်မရှင်ထံဆက်တင် ဧပြီ၂၁ရက်တွင်ကော်မရှင်မှကျန်းမာရေးဝန်ကြီးထံတင်ရန်လမ်းညွှန်ပြီးဝန်ကြီးမှလာရောက်တင်ပြရန်ခေါ်ယူ ဧပြီ၂၆ရက်တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအားအသေးစိတ်ရှင်း လင်းပြသခဲ့ပါသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမှဆေးသုတေသနဌာနသို့ဆေးဝါးနမူနာ များပေးပို့စစ်ဆေးစေခဲ့ မေလ ၇ ရက်နေ့တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမှခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ စမ်းသပ်မှူအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါကြောင်း. တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်နေပါ၍လွှတ်တော်၌တင်ပြ၍ဥပဒေပြု ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်နေသေးပါကြောင်း မေလ ၁၈ ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများစတင်ပါကအရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေး ပါမည့်အကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံမှလည်းဆေးဝါးများစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ကြရန်နှင့်သင့်တော်စိတ်ချရမည့်အခြေအနေရှိဆေးဝါး များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြရန် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
ယခုဆေးမှာ တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်သော်လည်းသောက်ဆေးအပြင်ထိုးဆေးအဖြစ်ပါအသုံးပြုနိုင် လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သဖြင့်ဥပဒေခွင့်ပြု ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကြောင်း လွှတ်တော်တွင်တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီးဆုံးဖြတ်၍ဥပဒေပြုခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာစမ်းသပ်ကုသခွင့်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း အမှန်တကယ်သာခွင့်ပြုချက်လည်းရ အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ပါက မိမိတို့မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းတင်မဟုတ်ပဲ လူသားအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်ပါကြောင်း ခွင့်ပြာချက်ရနိုင်အောင်လည်းဝိုင်းဝန်တင်ပြညှိနှိုင်းပေးပါမည့်အကြောင်း အောင်မြင်ပါစေဟု လည်းဆန္ဒပြုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့
ဆေး—မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး. ဆေးပေါင်း စားဆေးထိုးဆေး ဆေးဝါးပညာရှင်—ဗိုလ်လှဖေ(ခ)သခင်လှဖေ. ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်. မူရင်းပညာရှင် လက်ရှိ—ဗိုလ်လှဖေ၏မြေးအရင်းဌာန—လက်ရှိဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ဆေးပေါင်းရုံမှာဖောင်ကြီးကိုဗစ်ရောဂါကုဆေးရုံအနီး ကုသပုံ—‘အရေးပေါ်အနေအထားအသက်ရှူစက်ကူနေရသူလူနာအား ၄င်းဆေးပေါင်းရည် .5 စီစီအားသွေးကြောတွင်းထိုးသွင်းလိုက်ပါက ၅ မိနစ်အတွင်းအသက်ရှူကူစက်မလိုအောင်အသက်ရှူလာနိုင်မည် ပြီးလျှင်သိသိသာသာသက်သာလာပါမည်
မနက်နေ့လည်ည တစ်ရက်သုံးကြီမ်နှုန်းထိုးသွင်းကုသပါက သုံးရကမှငါးရက်အတွင်းရောဂါလုံးဝအလျှင်းပျောက်ကင်း နိုင်ပါသည် သာမန်ပိုးတွေ့လူနာများအားတစ်ကြိမ်လျှင်.5စီစီအားပျားရည်စစ်လဘက်ရည်သောက်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာဖြင့်ရောစပ်၍ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ၅ရက်တိုက်ကျွေးယုံနှင့်ရောဂါပိုးအလျှင်းပျောက် ကင်းစေရုံသာမက နောက်ထပ်မည်သို့မျှရောဂါပိုးထပ်မံမကူးစက်နိုင်တော့ပါ ရောဂပိုးကူးစက်ခံရခြင်းမရှိသေးသူများ.5စီစီကိူပျားရည် ဖြင့်တစ်ကြိမ်ကြိုတင်ကာကွယ်သောက်သုံးထားယုံဖြင့် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိအောင်ကာကွယ်ထားနိုငိပါသည်
ယခုပို့စ်တင်သူကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဆေးသောက်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုမှာယခင်နှင့်မတူသိသိသာသာကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်လာပါသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်နှင့်အမြန်ကုသမှူစတင်ပါမည် လွှတ်တော်ခွင့်ပြုချက်ရရှိနိူင်စေရန်နှင့်ကုသမှုရာနှုံးပြည့်အောင်မြင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်
ပြည်သူလူထုအပေါင်းမှလည်းဝိုင်းဝန်ဆုတောင်းပေးကြစေလိုပါသည် ကပ်ရောဂါဘေးဆိုးမှအမြန်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ လူသားအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ လုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေ ဖြူစင်မေတ္တာများဖြင့်